Ihe ntanetị kacha mma arụnyere ihe eji eme ihe maka ipad Air 4 pro 11 maka Samsung tab S7 S6 Lite Emeputa na Factlọ ọrụ | Ndị njem
Ọ ga-amasị gị ịpị ihe a
Okwu keyboard a na - ejikọta trackpad nkenke ya na keyboard zuru oke maka iPad gị. Nkwado mmegharị aka zuru ezu na-agbanwe iPad gị ka ọ bụrụ igwe nrụpụta maka ịrụ ọrụ na mpempe akwụkwọ na akwụkwọ, ngwa ọrụ mmụta siri ike maka klaasị dịpụrụ adịpụ, na ndị ọzọ — ohere dịnụ enweghị njedebe.
Na-arụ ọrụ na trackpad nkenke na ngwa dị ka ndetu, peeji nke, nọmba table na keynote. Ga-enwe ike igosipụta mpempe akwụkwọ na-ebugharị, depụta okwu, ma dezie ozi ịntanetị na ịdị nro.
NTTRTA ỌR SM
Ngwa ngwa soro arụpụtaghị gị na njikwa njiri aka ị maraworị ma hụ n'anya. Swipe, pịgharịa, gbanye ngwa, tuo, pịa abụọ, na ndị ọzọ.
Mgbanwe kickstand na-enye 40 Celsius nke tilt otú i nwere ike mgbe niile chọta ezi n'akuku maka ọrụ na aka. Ngwunye mgbatị siri ike na-eme ka kickstand ahụ guzosie ike ma ghara daa, ọbụlagodi na ịme ọpịpị siri ike.
N'Ihu NA azụ nchedo
Debe ihu na azụ nke iPad gị pụọ na scuffs, ọkọ, na wụfuru. Ọ na-ejide iPad na ikpe dị fechaa nke na-echedo nkuku ma ọ naghị ada gị mbà. Ihe mkpuchi dị na mpụga dị nro dị nro.
N'ihu na azụ mputa: emere site na PU akpụkpọ anụ na-adịgide adịgide, chedo mbadamba nkume gị site na ájá, dobe na bumps na ojiji kwa ụbọchị.
N'ime: TPU azụ shei na microfiber dị nro.
TPU shei na - ejide ipad gị, arụmọrụ zuru oke maka ipad gị. Na-echedo ipad gị n'akụkụ anọ na nkuku.
Soft microfibre na-echebe mbadamba nkume gị ka ị ghara ịcha.
Enwere ike ịhọrọ ụlọ ahịa
Nwee obi uto n'iji iPad n'ime ime ulo gi ebe oriọna adighi ala? Anyị na-emekwa. Ọ bụ ya mere keyboard batara na-abịa na backlit. Asaa na agba kemeghi azụ ọkụ hụ na ị pụrụ ịhụ ihe ị na-eme ma ị nọ n'ime ime, na ụgbọelu, maa ụlọikwuu, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ala-ìhè gburugburu ebe obibi. Ma ya na ụlọ ọrụ gị na egwuregwu egwuregwu gị.
UGBUA NKP YOURTA UNU P CANR ACT IME KA LAPTOP
Kporie oge nke izu ike, nke ịpị sụgharịta ekele maka igodo sissor na ibe dị mma, yabụ aka gị agaghị ada mbà. Isi njem nke 2 mm na-enye ezigbo omimi maka ọsọ na nkasi obi.
Ọrụ raara onwe ya nye na igodo ụzọ mkpirisi ọtụtụ iji kparịta maka iOS, sistemụ ma ọ bụ sistemụ Windows, hapụ gị ka ijikwa mbadamba nkume ahụ na-ahapụghị keyboard.
OTEE AKA BATTERY NDIFE
Njikere mgbe ịchọrọ ya, agwakọta Bluetooth keyboard na-eji batrị lithium na-akwụ ụgwọ iji rụọ ọrụ igodo ahụ. Ekele maka usoro ike smart, ọ na-adịgide ruo afọ 3 na-enweghị mkpa iji dochie ya.
Mfe usoro, ANA-AKW CONKWỌ Njikọ
Advanced Bluetooth 3.0 na-enye njikọ a pụrụ ịdabere na ya nke na-agaghị ada n'etiti mbadamba na keyboard. Mbido dị mfe - usoro atọ dị mfe na-ewe otu nkeji iji wuchaa ya.
Nke mbụ, pịa bọtịnụ "ON". Ihe ngosi na-acha anụnụ anụnụ.
Nke abụọ, pịa bọtịnụ “Jikọọ”
Mgbe ahụ, Gbanwuo mbadamba Bluetooth gị mbadamba .Ọ ga-achọ keyboard gị Bluetooth.
N'ikpeazụ, ọ ga-ahụ Bluetooth Keyboard 3.0. Just dakọtara ya.
Site ugbu a gaa n'ihu, ha ga-ejikọ mbadamba nkume gị na akpaghị aka.
Elu x Obosara x Omimi: 270 mm x 200 mm x 20mm
MOQ: 50PCS / agba
Asambodo: FCC, ROHS, CE, GS, RECH, Sgs
Nha: 11 ”
Design: Integrated trackpad keyboard ikpe
Keyboard Version: Asụsụ Bekee
Mbukota: Akwụkwọ igbe, opp akpa
Mentkwụ :gwọ: 1.T / T 2.W Western Union 3. Paypal
Logo: Debossed / Nabata ahaziri
OEM / ODM Design: anabata ahaziri imewe
Ihe: Premium akpụkpọ anụ mkpuchi na TPU azụ shei
Njirimara: inogide, iguzogide nchapu, ihe mkpuchi, uzuzu uzuzu, imewe magnet.
Njikọ dị: Bluetooth 3.0
Mgbapu mmiri: Ee, okwu mpụga. Mba, igodo keyboard
Igwe Igwe ụra / Tetanụ: Mba
Igwe Ọdụdọ na-emechi: Ee
Igwefoto Igwefoto: Ee
Ilele ọnọdụ: 105, 120, 135 na ndị ọzọ ogo
Magnetic Mgbabere: Ee
Ihe ngosi ọkụ (Ikanam): Ee, maka Bluetooth na ike
Ngosipụta LCD: Mba
Igodo njem: 2 mm
Keyboard irè anya: n'ime 10m
Ndụ Ndụ: ihe karịrị nde 3 ọrịa strok
Igodo pụrụ iche: Usoro ọrụ ụzọ nke ụzọ mkpirisi, gụnyere njikwa mgbasa ozi, njikwa olu, mkpọchi ihuenyo na ọchụchọ
Jikọọ / Ike: Gbanye / Gbanyụọ keyboard
Batrị nkọwa: wuru na-Lithium batrị
Typedị Batrị: Na-akwụghachi ụgwọ
iOS / A gam akporo / Windows OS
Tabletsgbaso mbadamba ikpe dị na Nlụpụta. Nabata OEM / ODM maka mbadamba ndị ọzọ.
iPad Ikuku 4Nke Ọgbọ 10.9 "2020
Nlereanya: A2072, A2316, A2324, A2325
iPad Pro 11 2020 2nd Ọgbọ Nlereanya: A2228, A2068, A2230, A2231
iPad Pro 11 2018 Nlereanya: A2013, A1934, A1980, A1979
iPad Pro 12.9 2020 ọgbọ nke anọ
Nlereanya: A2229, A2069, A2232, A2233
iPad Pro 12.9 2018 ọgbọ 3
Nlereanya: A1876, A2014, A1895, A1983
iPad ikuku 10.5 2019 ọgbọ nke atọ Nlereanya: A2152, A2123, A2153, A2154
iPad 9.7 2018/2017 (6 nke 5th ọgbọ) Nlereanya: A1893 ， A1954 ， A1822 ， A1823
iPad Pro 10.5 2017 Nlereanya: A1701, A1709, A1852
Galaxy Tab A7 10.4 "(2020) Nlereanya: SM-T505 SM-T500 SM-T507
Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen 10.1 "2020 Nlereanya: TB-X306X TB-X306F
Lenovo tab M10 gbakwunyere 10.3 "2020 Nlereanya: TB-X606X TB-X606F
Lenovo tab M10 10.1 "2019 Nlereanya: TB-X605F TB-X605L
Nke gara aga: Universal folio ikpe na mbughari Bluetooth kiiboodu maka 9.7-11 inch Apple, Andriod, Windows mbadamba
Osote: ikpe na keyboard Bluetooth nke mbughari maka Lenovo tab M10 Plus For Ipad for Samsung tablet
Mbadamba keyboard wepụ
Ikuku kiiboodu Case
ikpe na-ewepu Bluetooth keyboard maka Leno ...
Universal folio ikpe na mbughari Bluetooth k ...